EU na-ekwusi ike na ịmachi ọrụ nke ụlọ ọrụ crypto - CoinWorldMap
Dị ka mkparita uka na EU crypto regulatory framework nke a maara dị ka Crypto Asset Market Regulation (MiCA) na-abịaru nso na EU na-arụ ọrụ na ikpeazụ ya, ndị òtù European nzuko omeiwu na-akwalite maka mmachi na crypto ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ site na ebubo ụtụ isi mba.
Otú ọ dị, dị ka akwụkwọ hụrụ CoinDesk, European Commission ekwetaghị. Dị ka akwụkwọ ahụ si kwuo, amụma dị otú ahụ bụ ihe a na-enyo enyo ma na-ekpughe EU n'ihe ize ndụ nke imebi iwu ahia. Tụkwasị na nke ahụ, nkọwa akwụkwọ ahụ na mpaghara ndị ọzọ enweghị ihe mgbochi ndị dị otú ahụ, ma ọ ka edoghị anya ihe mere ha ga-eji tinye naanị na ahịa crypto na-apụta.
Akwụkwọ akụkọ ahụ rụrụ ụka na "mmachibido iwu dị otú ahụ… nwere ike ịmepụta ihe mgbochi na ịnye ọrụ na EU", nke, dị ka ndị edemede si kwuo, nwere ike iduga mmebi nke ọrụ EU na World Trade Organisation. Ka ọ dị ugbu a, imebi iwu azụmahịa mba ụwa abụghị naanị ihe kọmishọna welitere n'akwụkwọ ahụ.
Akụkọ ahụ gosiri na kọmishọna ahụ Njedebe n'akwụkwọ akụkọ ahụ echeghịkwa na iwu dị otú ahụ ga-ekwe omume. Akwụkwọ ahụ na-atụ aro ka EU tụleba iwu a na iwu mgbochi ịpụnara ego (AML) sara mbara ma ọ bụrụ na o chere na usoro ndị ahụ dị mkpa.
Ụzọ na-adịghị mma maka iwu Crypto
Nkwupụta kachasị ọhụrụ na ọrụ MiCA na-esote mmachibido iwu PoW cryptocurrencies n'oge ntuli aka March na ọrụ MiCA. Ọ dabara nke ọma, oru ngo a eruola ọkwa trilogy. na-enweghị mgbalị site n'aka ndị na-akwado mmachibido iwu ahụ ịmaliteghachi ya n'ime etiti.
Ọ bụ ezie na ọrụ MiCA na-aga n'ihu, ndị na-egwu ụlọ ọrụ crypto na ndị na-agba ọsọ na-ezubere maka ọrụ AML akwadoro na nso nso a, bụ nke dị ugbu a na ọkwa trilogy ya, nke nwere ike machibido obere akpa na-enweghị njikọ ma mebie iwu nzuzo. Ugbu a, ọtụtụ ndị nwere mmasị na-agba mbọ ma na-agbalị ime ka ndị omebe iwu wepụ ihe a site na mkparita ụka nke atọ.
Ka e were ya na EU ada ada n'ụzọ ziri ezi n'etiti nchedo onye ọrụ na ihe ọhụrụ na iwu ya. Ọ nwere ike ịdaba n'azụ asọmpi n'ihe ọtụtụ ndị na-ahụ dị ka ọganihu teknụzụ na-esote mgbe ịntanetị gasịrị. N'izu gara aga, onye isi nke kọmitii na-ahụ maka ọrụ ego nke otu ahụ kpọrọ oku maka nkwenye zuru ụwa ọnụ na iwu, na-akwado maka mmekorita n'etiti EU na US.